Musharaxiin Madaxweyne oo ka hartay Doorashada iyo kuwa kale oo iyana tanaasulaya | Allbanaadir.com
Home NEWS Musharaxiin Madaxweyne oo ka hartay Doorashada iyo kuwa kale oo iyana tanaasulaya
Musharaxiin Madaxweyne oo ka hartay Doorashada iyo kuwa kale oo iyana tanaasulaya
Musharaxiin u taagnaa qabashada xilka Madaxweynaha Soomaaliya ee beri la dooranayo ayaa cadeeyay in ay isaga hareen doorashada, halka la filayo in saacadaha soo socda ilaa beri iyana doorashada isaga haraan musharaxiin kale.
Labo musharax oo kala ah Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Cabdinaasir Cabdulle oo isku beel ah ayaa ilaa hada cadeeyay in doorashada ka hareen una tanaasuleen musharax kale oo ay isku beel yihiin.
Waxaa iyana la filayaa kahor doorashada iyo marka ay bilaabato ay tanaasulaan musharaxiin kale , kuwaa oo markii horaba ogaa in aan la dooran doonin balse ujeedkoodu ahaa in taariikhda u gasho in musharax Madaxweyne noqdeen.
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa si adag ugu loolami doona musharaxiin aan ka badneen ilaa 10-kuwaa oo qaba kalsooni badan ay aaminsan yihiin in ay ku heli karaan codad badan.
Loolanka doorashada Madaxweynaha Soomaaliya oo sannadkan ah mid adag ayaa waxaa musharaxiinta ku tartamaya wadaan ololihii ugu dambeeyay, waxaana musharaxiinta qaar si hoose u sameesteen isbaheysiyo halka kuwa kalana shirar u socdaan.
Dadka ugu cad cad ee doorashada loo saadaalinayo ayaa waxaa kamid ah Ra’isul Wasaarihi hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, Madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo iyo labo Madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud.
Previous articleShir Xasaasi ah oo looga hadlayay Amniga doorashaada oo goordhaw ka dhacay Muqdisho (Sawirro)
Next articleImaaraadka Carabta oo yeeshay Madaxweyne Cusub kadib geerida Sheikh Khalifa Bin Zayed